ငါသုတေသီများရုန်းကန်ဖို့မျှော်လင့်ထားရှိရာစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးဧရိယာမသေချာမရေရာ၏မျက်နှာကိုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနေသည်။ အဲဒီသုတေသနကျင့်ဝတ်ပြုပါရန်နှင့်ဘာလုပ်ဖို့မအဘယ်သို့သောအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချကပါဝင်ပတ်သက်, အပေါငျးတို့သဒဿနပညာရှင်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်အပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေမကြာခဏမပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Encore ဒီဇိုင်းတဲ့အခါမှာဥပမာ, သုတေသီများကတစ်စုံတစ်ဦးကိုရဲကသွားရောက်ကြည့်ရှုစေမယ်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိရန်ဆန္ဒရှိကြပေလိမ့်မည်။ စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ဒီဇိုင်းသည့်အခါသို့မဟုတ်, သုတေသီများအချို့သင်တန်းသားများအတွက်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိရန်ဆန္ဒရှိကြပေလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ကောင်းအလွန်နိမ့်ခဲ့ကြပေမယ့်သုတေသနပြုရာအရပ်ကိုကြာမတိုင်မီသူတို့နားမလည်ပါဘူး။ မစီမံကိန်းကိုလူသိရှင်ကြားဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ခြေရာခံသောကြောင့်, ဤဖြစ်နိုင်ခြေနေဆဲယေဘုယျအားဖြင့်လူသိများကြသည်မဟုတ်။
မသေချာမရေရာဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနမှထူးခြားသောမရှိကြပေ။ အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာအန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များစနစ်တကျအကဲဖြတ်ဖော်ပြထားသည့်အခါကအတိအလင်းသည်ဤအတိအကျတွက်ချက်ရန်လည်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤရွေ့ကားမသေချာမရေရာမှုများ, သို့သော်ကျနော်တို့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သုတေသနသူ့ဟာသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏သုတေသနနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူလျော့နည်းအတွေ့အကြုံရှိသည်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်၎င်း, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ပိုမိုပြင်းထန်ဖြစ်ကြသည်။
ဤအမသေချာမရေရာမှုများပေးထားအချို့လူများကကြိုတင်ကာကွယ်မှုနိယာမတစ်ခုအသိအမှတ်ပြုထားသည့်ဗားရှင်းဖြစ်သည့် "စိတ်မကောင်းပါဘူးထက်ပိုကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ကင်း" နဲ့တူတစ်ခုခုထောက်ခံပုံရသည်။ ဒီချဉ်းကပ်နည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်-ဖြစ်ကောင်းပင်ပုံပေါ်နေချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်ပညာရှိ-ကြောင့်အမှန်တကယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်, ကသုတေသနမှအေး၏, ထိုသို့လူများတို့သည်အခြေအနေတစ်ခုအလွန်အကျွံကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်ယူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Sunstein 2005) ။ အဆိုပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုနိယာမနှင့်အတူပြဿနာများကိုနားလည်ရန်အလို့ငှာရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတွေအကြောင်း 700,000 လူတွေပါဝင်ဖို့စီစဉ်ထားလျက်, စမ်းသပ်မှုရှိလူများအန္တရာယ်ခံရမယ်လို့တချို့အခွင့်အလမ်းဆက်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်စမ်းသပ်မှု Facebook အသုံးပြုသူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့အသိပညာလိုက်လျောနိုင်ကြောင်းအချို့သောအခွင့်အလမ်းလည်းရှိ၏။ ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိသောအသိပညာထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်, ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စွန့်စားမှု (ရှိရှိကွှေးကျွောဆွေးနွေးတင်ပြထားပြီးကဲ့သို့) ဖြစ်ခဲ့သည်ခွင့်ပြုနေစဉ်မှာလည်းတစ်ဦးစွန့်စားမှုဖြစ်ရပြီလိမ့်မယ်။ ၏သင်တန်း, ရှေးခယျြမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့အဖြစ်စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာနှင့်စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြားမဟုတ်ခဲ့, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာသို့ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီအံ့သောငှါဒီဇိုင်းဖို့အများကြီးဖြစ်နိုင်သမျှပြုပြင်မွမ်းမံရှိခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ချိန်ချိန်, သုတေသီများလေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်နေတာကလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြားရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အရေးမယူနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အန္တရာယ်များရှိနေပါသည်။ ကိုယ်ကသာလုပ်ဆောင်ချက်၏အန္တရာယ်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့မသင့်လျော်သည်။ အတော်လေးရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှု-အခမဲ့ချဉ်းကပ်မှုလည်းမရှိ။
အဆိုပါကြိုတင်ကာကွယ်မှုနိယာမထက်ကျော်လွန်ပြီး Moving, မရေရာပေးထားဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချစဉ်းစားရန်တဦးတည်းအရေးကြီးသောနည်းလမ်းအနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်စံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအားကစားကစားခြင်းနှင့်ကားများမောင်းနှင်အဖြစ်အခြေခံစံနှုန်းကိုဤစံကြိုးစားမှုသင်တန်းသားများကိုသူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌ဆောင်ရွက်ရန်သောအန္တရာယ်များကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အထူးသဖြင့်လေ့လာမှုများ၏အန္တရာယ်, (Wendler et al. 2005) ။ တစ်ခုခုအနည်းဆုံးအန္တရာယ်စံနှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်အန္တရာယ်များ၏အမှန်တကယ်အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသောကွောငျ့ဤသည်ချဉ်းကပ်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုစတင်မတိုင်မီဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်အတွက်, သုတေသီသည်အခြားသတင်းများ Facebook ပေါ်တွင် Feeds ၏အတူစမ်းသပ်မှုများတွင် News Feeds ၏စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်။ သူတို့အလားတူခဲ့လျှင်, ထိုသုတေသီများစမ်းသပ်မှုဟာအနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်စံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင် (MN Meyer 2015) ။ ထိုသူတို့ကသူတို့အန္တရာယ်၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအဆင့်ကိုမသိလျှင်တောင်မှဒီဆုံးဖြတ်ချက်စေနိုင်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ချဉ်းကပ် Encore ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ Encore ထိုကဲ့သို့သောဖိနှိပ်အစိုးရများနှင့်အတူတိုင်းပြည်များတွင်ပိတ်ပင်ထားသောနိုင်ငံရေးအုပ်စုများရှိသူများအဖြစ်အထိခိုက်မခံဖြစ်လူသိများခဲ့က်ဘ်ဆိုက်များမှတောင်းဆိုမှုများမှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်အချို့သောနိုင်ငံများရှိသင်တန်းသားများကိုများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော် Encore-သောဆိုက်များတောင်းဆိုမှုများကိုသာမန် web browsing ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင့်သာတွစ်တာ, Facebook, YouTube ကို-ခဲ့အနည်းဆုံးအန္တရာယ်မှတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်၏, ထိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်း (Narayanan and Zevenbergen 2015) ။
အမည်မသိအန္တရာယ်နှင့်အတူလေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချတဲ့အခါမှာတစ်ဦးကစက္ကန့်အရေးကြီးသောစိတ်ကူးသုတေသီများသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးထားသောအရွယ်အစားအနေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု detect လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်နမူနာအရွယ်အစားတွက်ချက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် (Cohen 1988) ။ သင့်ရဲ့လေ့လာမှုအန္တာရာယ်-ပင်မှအနည်းငယ်မျှသာပါဝင်သူများကိုဖော်ထုတ်စေခြင်းငှါ, အကယ်. အန္တရာယ်-ပြီးတော့ကောင်းတဲ့၏နိယာမသင်သည်သင်၏သုတေသနရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်လိုအပ်အန္တရာယ်၏အသေးငယ်ဆုံးပမာဏကိုစည်းကြပ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ (နောက်ကျောအခန်း 4. အတွက်နိယာမကိုလျှော့ချဖို့စဉ်းစားပါ) အချို့သုတေသီများတတ်နိုင်သမျှကြီးကြီး, သုတေသနကျင့်ဝတ်အဖြစ်၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများအောင်နှင့်အတူတစ်ဦးစွဲရှိသော်လည်းသုတေသီများတတ်နိုင်သမျှသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုများအဖြစ်အသေးစားလုပ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ပါဝါကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်တန်းအသစ်မဟုတ်ပေမယ်က Analog စအရွယ်နှင့်မည်သို့ကြောင့်ယနေ့အသုံးပြုသင့်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်လမ်းအကြားအရေးပါသောကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Analog စအရွယ်မှာတော့သုတေသီများယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏လေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာအောက်မှာ-powered) သေးငယ်လွန်းမဟုတျကွောငျးသေချာစေရန်အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုပြု၏။ သို့သျောယခုသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့လေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, Over-စွမ်းအင်သုံး) အရမ်းကြီးမားတဲ့မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါအနည်းဆုံးအန္တရာယ်စံများနှင့်သင့်အကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကူအညီနှငျ့ဒီဇိုငျးလေ့လာမှုများ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင်တန်းသားများကိုသင့်ရဲ့လေ့လာမှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့အထဲတွင်ပါဝင်ထံမှတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုခံစားရစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုမဆိုသတင်းအချက်အလက်သစ်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုမပေးပါဘူး။ မသေချာမရေရာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများမှဦးဆောင်နှင့်စမ်းသပ်မှုတွေဆန္ဒပြရာအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, စုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခုစီပြီးနောက်ဖြေဆိုသူသူတို့အဖြေကိုရှင်းပြနိုင်သည့်အတွက်အာကာသထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြေဆိုသူ-သူအချို့အခြေခံလူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို -answer တစ် microtask လုပ်အားစျေးကွက်ကနေစုဆောင်းအလားအလာသင်တန်းသားများသို့မဟုတ်လူတွေ (ဥပမာအမေဇုံစက်မှု Turk) ဖြစ်နိုင်ပါတယ် (Schechter and Bravo-Lillo 2014) ။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများငါအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေကြောင်းသုံး features တွေရှိသည်။ ပထမဦးစွာသူတို့တစ်တွေလေ့လာမှုကောက်ယူထားပြီးမတိုင်မီဖြစ်ပျက်နှင့်ထိုကြောင့်သူတို့သည် (ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများအတွက်စောင့်ကြည့်ကြောင်းချဉ်းကပ်မှုဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) သုတေသနစတင်မတိုင်မီပြဿနာများကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများအတွက်ဖြေဆိုသူပုံမှန်အားသုတေသီများမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်ဒီသုတေသီများအများပြည်သူ၏ရှုထောင့်ကနေသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုတွေ့မြင်ကူညီပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများအတူတူပင်စီမံကိန်းကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း၏ရိပ်မိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်သုတေသနစီမံကိန်းကို multiple ဗားရှင်းရှိုးမှသုတေသီများကို enable ။ တဦးတည်းန့်အသတ်, သို့သော်, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများကစစ်တမ်းရလဒ်များကပေးသောကွဲပြားခြားနားသောသုတေသနဒီဇိုင်းများအကြားဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤကန့်သတ်နေသော်လည်း, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများအထောကျအကူဖွစျဖို့ပေါ်လာ; တကယ်တော့, Schechter and Bravo-Lillo (2014) အနေနဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်သူအားဖြင့်ကြီးပြင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်စီစဉ်ထားလေ့လာမှုစွန့်ခွာအစီရင်ခံစာ။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများအဆိုပြုထားသုတေသနမှတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, သူတို့ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှုများကိုတိုင်းတာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များက High-အန္တရာယ် setting တွင်မရေရာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကြောင်းတလမ်းတည်းဖြင့်အချို့သောလူမှုရေးသုတေသနအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်အံ့သောငှါဆန္ဒပြစမ်းသပ်မှုတွေ -an ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုမူးယစ်ဆေး၏ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်သည့်အခါသုတေသီများချက်ချင်းကြီးတစ်ခုကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှခုန်ကြပါဘူး။ ယင်းအစားသူတို့ကပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုများနှစ်မျိုးကို run ။ အစပိုင်းတွင်တစ်ဦးအဆင့်ငါရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်သုတေသီများအထူးသဖြင့်လုံခြုံထိုးရှာဖွေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်, ဤလေ့လာမှုများလူမျိုး၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကပါဝငျသညျ။ လုံခြုံထိုးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးပြီးတာနဲ့အဆင့် II ကိုစမ်းသပ်မှုတွေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ရန်; အကြောင်း, တစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံး-ကိစ္စတွင်အခြေအနေမှာအလုပ်လုပ်မှ၎င်း၏စွမ်းရည်ပင်ဖြစ်သည် (Singal, Higgins, and Waljee 2014) ။ သာအဆင့်ပြီးနောက်ငါနှင့် II ကိုလေ့လာမှုများပြီးစီးပြီကြီးမားတဲ့ကျပန်းထိန်းချုပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့အသစ်တစ်ခုကိုမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်စမ်းသပ်မှုတွေ၏အတိအကျကိုဖွဲ့စည်းပုံလူမှုရေးသုတေသနဘို့အကောင်းတစ်မထိုက်မတန်မကျမည်အကြောင်းနေစဉ်မသေချာမရေရာနှငျ့ရငျဆိုငျရသောအခါ, သုတေသီများအတိအလင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သေးငယ်လေ့လာမှုများကို run နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Encore အတူသငျသညျပညတျတရား၏ခိုင်မာတဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့တိုင်းပြည်များတွင်ပါဝင်သူနှင့်အတူစတင်သုတေသီစိတ်ကူးနိုင်ဘူး။
အတူတူ, ဤလေးချဉ်းကပ်-The အနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်စံ, ပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ-တုံ့ပြန်မှုစစ်တမ်းများနှင့်ဆန္ဒပြသင်ပင်မသေချာမရေရာ၏မျက်နှာကိုအတွက်တစ်ဦးကိုပညာရှိလမ်းအတွက်ရှေ့ဆက်ကူညီစမ်းသပ်မှုတွေ-နိုင်ပါတယ်။ မသေချာမရေရာအရေးမယူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမလိုပေ။